Qarax iyo Is Risaseen Ka dhacdey Duleedka Degmada Balcad ee Gobolka Shabelada Dhexe
Wararka ka imaanaya Deegaanka Golaleey oo dhaca Dueedka Degmada Balcad ee Gobalka Shabeelaha Dhexe ayaa ku waramaayo in gaari nuuca dagaalka oo loo yaqaan Cabdi Bille ay ku safraayeen qaar kamid ah ciidamada Dowladda Soomaaliya Miino loo dhigay, halkaana uu ku dhintay wadahii gaarigaas waday iyadoo lix kalane ay ku dhaawacmeyn.
wararka ayaa intaas ku daraayo in qaraxaasi dabadeed rag hubeesan ay durbadiiba ay soo gaareen goobtaasi halkaa uu iska hor imaad uu ku dhax maraayo ciidamada qaraxa a badbaaday iyo dableyda hubeesneed.
Goob jooge ayaa xaqiijyey in is risaaseenta ay weli socoto oo ay xabado is weedaarsanaayaan labada dhinac, wax intaas dheerna an laga ogeyn is risaaseentaasi.
Waayahii dambe waxaa soo badanaayey in ciidamada Dowladda Wadada hareeraheeda miinooyin loogu aaso, iilaa iyo haatana ma jirto cid sheegatay weerarkaasi miinada ku bilaawday dabadeedna risaasta isku badalay.
Booliiska Alexandria ayaa sheegay in FBI-du ay la wareegeen baadhitaanka toogashada, oo ka bilaabatay garoonka Eugene Simpson wax yar kaddib toddobadii aroornimo Arbacadii.